Amsterdam Court of Appeal: Scythian Gold ndeyeUkraine
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Amsterdam Court of Appeal: Scythian Gold ndeyeUkraine
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • tsika nemagariro • dzidzo • Entertainment • Hurumende Nhau • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Ukraine Kuputsa Nhau
Dare reAmsterdam: Muunganidzwa weGoridhe weScythian ndeweUkraine.
Muna Zvita 2016, Dare reDunhu reAmsterdam rakapa mutongo wekuti pfuma yegoridhe yeScythian idzoserwe kuUkraine zvichibva pamitemo yechiDutch nemitemo yenyika. Muna Kurume 2017, mamuseum eCrimea akakwidza nyaya ichipokana nesarudzo.
Dare reDutch rinotonga kuti muunganidzwa weGoridhe weScythian uendeswe kuUkraine.
Muunganidzwa weGoridhe weScythian wakatonga kuve chikamu chenhaka yetsika yeUkraine State.
Chisungo cheAllard Pierson Museum chekudzosera zvimedu zvemuseum kumamyuziyamu eCrimea zvapera.
Mutongi Mukuru Pauline Hofmeijer-Rutten azivisa nhasi kuti Amsterdam Dare rekukwidza akatonga kuti Scythian Gold muunganidzwa chikamu chenhaka yetsika yeUkraine State, uye inofanira kupihwa neAllard Pierson Museum kuState Museum Fund yeUkraine.
"Dare repamusorosoro reAmsterdam rakapa mutongo wekuti Allard Pierson Museum inofanira kupa 'Crimean Treasures' kuUkraine State," Hofmeijer-Rutten akadaro, achiwedzera kuti zvigadzirwa "chikamu chenhaka yetsika yeUkraine State" uye. "ndeyechikamu cheruzhinji cheState Museum Fund yeUkraine."
Dare rakatiwo "chisungo cheAllard Pierson Museum chekudzosera zvimedu zvemyuziyamu kumamyuziyamu eCrimea chapera."
The Scythian Gold kuunganidzwa kwezvinhu zvinodarika zviuru zviviri kwakaonekwa paAllard Pierson Museum yeUniversity of Amsterdam pakati paKukadzi naNyamavhuvhu 2,000. Mushure mekutorwa neRussia Crimea muna Kurume 2014, kusava nechokwadi pamusoro pekuunganidza kwakamuka sezvo Russia neUkraine dzaitora zvakaratidzwa. Panyaya iyi, Yunivhesiti yeAmsterdam yakamisa kupihwa kwekuunganidza kudzamara gakava ragadziriswa zviri pamutemo kana mapato awirirana.
Muna Zvita 2016, Dare reDunhu reAmsterdam rakapa mutongo wekuti pfuma yegoridhe yeScythian idzoserwe kuUkraine zvichibva pamitemo yechiDutch nemitemo yenyika. Muna March 2017, Crimeamamuseum akamhan'ara achipikisa mutongo uyu.
Muna Kurume 2019, Amsterdam Court of Appeal yakachinja mutongo wedare reruwa asi yakasendeka mutongo wenyaya yacho, ichikumbira mativi ose kuti ape mamwe magwaro.